Okporo ụzọ dị mma dị mma maka ọnụ ahịa nke uwe elu | Martech Zone
Satọde, 14 Juun 2008 Friday, February 12, 2016 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ịmebeghị n'ofe blọgụ Jeremy Shoemoney, ọ bụ nnukwu blog ịgbaso. Jeremy nwekwara nnukwu mmemme akpọrọ Free uwe elu Friday.
O nwere ike were ọnwa ole na ole ka Jeremy jiri uwe elu gị, ọ bụ mmemme a ma ama. Ọ ga-amasị m ịgwa ndị ntakịrị okwu mmetụta nke isonye na mmemme dika nke a. O doro anya na blọgụ Jeremy enweghị ihe jikọrọ ya na ndị agha Navy; Otú ọ dị, iru nke blọọgụ ya karịa ịme ya maka ire ahịa Okwu-ọnụ.
N'ime ọnwa ole na ole mbụ, ana m azụta Mgbasa ozi-kwa-Pịa, site na Google Adwords, iji kwalite NavyVets.com. Na ịgbakọ ọnụọgụ ndị ọrụ debanyere aha na ego mgbasa ozi m na-emefu, ana m akwụ ihe karịrị $ 8 kwa onye ọrụ e debara aha (aka: ntụgharị). Nke ahụ nwere ike ịdị oke ọnụ, ngwa ngwa. Ugbu a saịtị ahụ nwere ụfọdụ traction, emeela m ka ịzụta mgbasa ozi belata.
Netwọk mmekọrịta dị mma n'ịzụ ahịa n'onwe ha, mana ịkwesịrị ibu ụzọ nweta ezigbo ọnụọgụ. Obere Indiana, isi ihe dị ka ndị ọrụ 1,000. Ugbo mmiri dị ugbu a na ~ 300 ndị ọrụ.
Na ntụnyere, ịzụta uwe elu maka Jeremy dị ihe dị ka $ 16 na anyị natara ndoputa ọhụrụ asatọ n'ime awa 24 nke ọkwa ya.
Nke ahụ bụ $ 2 kwa ntughari kama $ 8, ezigbo ego!
Nweta saịtị ịchọrọ Jeremy iji kwalite? Zitere ya uwe elu!
Tags: jeremy akpụkpọ ụkwụshoemoneyuwe elu
Jun 14, 2008 na 8: 11 PM
Ezigala m onye a nwere ụlọ ọrụ ntanetị na ntanetị nwere ike ịbụ ụdị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ maka ya?! :) Scott
Ọkt 3, 2008 na 1:32 AM
Echiche mara mma, Douglas. Chee na m nwere ike ịmalite ihe yiri nke a na Australia 😉